एसईईको नतिजा निकाल्न कार्यविधि बनाइँदै, ११ र १२ कक्षाको परीक्षा के हुन्छ ? - Media Dabali
काठमाडौं – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा विद्यालयले गर्ने आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा प्रकाशित गर्ने कार्यविधि जेठभित्रै जारी गर्ने भएको छ ।
विद्यालय र शिक्षकलाई विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकन कसरी गर्ने भनेर नीतिगत रुपमा सहज बनाउन बोर्डले कार्यविधि बनाउन लागेको हो ।
बोर्डका अध्यक्ष प्रा. चन्द्रमणि पौडेलले कार्यविधिका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै यसै महिनाभित्र सार्वजनिक गरिने बताए । विशेषगरी विद्यार्थीको मूल्यांकनमा नम्बर कसरी दिने भन्ने मापदण्ड निर्धारण, विद्यालयमा यसका लागि कस्तो खालको संरचना हुने, मूल्यांकनमा को जिम्मेवार हुने लगायतका विषय स्पष्ट पार्ने काम कार्यविधिले गर्ने जनाइएको छ ।
सरकारले गत वर्ष पनि विद्यालयले गर्ने आन्तरिक मूल्यांकनका लागि कार्यविधि बनाएको थियो । कार्यविधिमा केही परिवर्तन गरी यस पटक कार्यविधि जारी गर्ने उनले जानकारी दिए । गत वर्षको कार्यविधिमा शिक्षकले गरेका कतिपय मूल्यांकनका कारण आलोचना गरिएको थियो ।
गत सोमवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकनबाट एसईई परीक्षा गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पाठ्यक्रम तथा विशिष्टीकरण तालिकाअनुसार विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्ने निचोड निकाल्दै सरकारले यस खालको नीतिगत परिवर्तन गरेको थियो ।
अब कार्यविधि जारी गरेपछि विद्यालयलाई विद्यार्थीको मूल्यांकन गरिसक्न २ हप्ताको समय दिने बोर्डको तयारी छ । विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्यांकनको विवरण सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा तथा समन्वय ईकाइमा पठाउने र समन्वय ईकाइले प्रमाणित गरी बोर्डमा पठाउनुपर्ने छ ।
बोर्डमा देशभरका विद्यालयबाट प्राप्त विवरण अद्यावधिक गरी विद्यार्थीको अन्तिम परीक्षाफल तयारी तथा प्रकाशन, प्रमाणीकरण र प्रमाणपत्र जारी गरिने छ । बोर्डलाई काम गर्न २० दिनको हाराहारीमा लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
गत वर्ष शिक्षकको आन्तरिक मूल्यांकनमा केही समस्या भएको भन्दै बोर्डले परीक्षाफलको प्रकाशनका केही दिन विलम्ब गरेको थियो ।
११ कक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अन्तिम मूल्यांकन भने विद्यालयले नै गर्नेछन् । सरकारले गत वर्ष नै नीतिगत निर्णय गर्दै विद्यालयलाई अधिकार दिइसकेको छ । १२ कक्षाको परीक्षाको विषयमा भने कुनै निर्णय गरिएको छैन ।
बोर्डले १२ कक्षाको परीक्षा सञ्चालन समेत वैकल्पिक विधिबाट गर्ने प्रस्ताव गरे पनि सरकारले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । गत वर्ष १२ कक्षामा बोर्डले ४० अंकको लिखित परीक्षा लिएको थियो । त्यसबाहेक विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकन र ११ कक्षाको नतिजालाई समेत आधार मानिएको थियो ।
केही महिना कुरेर भए पनि पुरानै मोडलबाट १२ कक्षाको परीक्षा हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
सोमवार, जेठ ३१ २०७८०९:१४:३२